Soojiidashada Star Si Booqashada City Vatican The | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Soojiidashada Star Si Booqashada City Vatican The
Haddii aad ku nooshahay Europe oo aad heysato a isbuucii si ay u tudhin (ama dhan ah toddobaadkii!), odhan “haa” in booqashada City Vatican-ka via rail iyo waxa ay ku raaxaystaan ​​at xawaaraha buuxa!
Qorshaynta on Booqashada City Vatican-ka?
Tan iyo markii ay 1929 Vatican ayaa dal madax-bannaan oo ka mid yar ee dunida oo dhan. weli, in marnaba dhimi sharaftiisii, qurux, oo ay si wayn u Waxyoon dhaqanka iyo taariikhiga ah muhiimadda. Inkastoo oolna ah in ka badan oo kaliya 0.44 kiiloomitir oo laba jibbaaran, Vatican’s waxay heshay soojiidasho fara badan oo ay ku hayaan dalxiisayaal mashquul: ka St. Peter Basilica ee si Chapel Sistine ah (iyo wax kasta oo kale in u dhexeeya), oo aad jecelaato labaad kasta oo qaatay in Vatican-ka.
Ilaa hadda sida booqashada City Vatican-ka via rail tagaa, waxaa jira casriga a tareen korontada diyaar u ah dhammaan dunida Vatican. Tareenka ayaa isku xiraya Vatican City boosteejada tareenka oo leh Pontifical Villas.
Halkan waxa ku soo jiidashada xiddiga yar ee Vatican-ka aad rabto in aad soo booqato iyo hesho wax badan oo ku saabsan waayo-aragnimo Italy.
St. Peter's Basilica ayaa ugu caansan markii uu booqanayo Vatican-ka
heer sare St The. Peter Basilica ee waa xuddun ee Vatican-ka, dhisay ku saabsan waxa la fahamsan yahay inuu meesha St. Butros xabaashiisii.
St. Peter Basilica ee ficil ahaan waa wadarta shaqada fannaaniin caan ah '. Absolutely baqeen-duwanyihiin, farshaxanka ee St. Peter Basilica ee bilaabaa idinka horreeyey galaan kaniisadda. marka hore aad arki doonaa taallada Bernini ee Constantine oo ay la socdaan hadhaagii mahrajaan Giotto ee kor ku xusan iridda ugu weyn ee. Waxay ay nimcadu balbaladii, iyo 185m macbudka dheer oo 46m dheer gaartay qubbad 119 mitir kor ku xusan! Dabcan, sidoo kale waxaa jira Michelangelo ee caanka Pietà in aad marnaba ma rumaysan doontaan indhihiinna! Eeg Chapel ah si deeqsinimo ah qurxiyey ee karaamada, Bernini ee Baldacchino naxaas Baroque weyn, meesha allabariga le'daan iyo si ka badan.
Rimini in Tareenadu Rome
Verona si ay Tareenadu Rome
Cajiib ah in ay xaq u gaarka ah, Chapel Sistine weli site kale waxaad heli doontaa si aad u aragto haddii aad booqanaya Vatican City tareenka. Dhisay by Pope Sixtus IV ee 1473-84 oo dib loo soo celiyo ka 1980 si ay u 1994, Sistine Chapel heysta frescoes by fannaaniinta badan. Ma magacyada Michelangelo, Perugino, Pinturicchio, Botticelli, Rosselli, Ghirlandaio, iyo Signorelli macnaheedu wax? Well, waxay caawisay derbiyada Chapel Sistine ka dhigi ugu xumaa ee rinjiyeynta Renaissance ah. Xukun hore Michelangelo ee rinji gudaha Chapel waxaa loo arkaa guusha ugu riwaayado iyo ugu weyn ee farshaxan Yurub.
Sistine Chapel waa meesha conclave in la doorto Pope ah waxaa la qabtaa. Daily, boqolaal ka mid ah dalxiisayaasha waxay jecel yihiin, iyo - aad noqon kartaa mid ka mid ah iyaga, waayo,, sidoo kale!
Museo Pio Clementino intii uu booqanayay Vatican-ka
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan booqashada City Vatican by rail waa in ay kuu ogolaanayaa inaad si ay u arkaan dhammaan ka indhaha lagama maarmaanka ah ee Vatican-ka.
Matxafyada Vatican-ka waxay soo bandhigaan bandhig qaabeysan oo nidaamsan oo ay naqshadeeyeen Popes Clement XIV iyo Pius VI 1769 si ay u 1799. Kuwani galleries tahay khasnaddiisa-trove qaybo muhiim ah oo muujinayo yar waa mid aad u adag! Mid kasta oo wax u gaar ah si ay u bixiyaan:
Sala Croce Greca sidata deeqsinimo qurxiyey sarcophagi iyo huruud iyo kuwo gaduud ah oo gabadhii Constantine ee, Constantia, oo hooyadiis
Sala delle Muse muujinaysaa Belvedere jir, shaqada ugu horeysay ee qarnigii-BC Michelangelo-bogi by Apollonius ee Athens
Gabinetto delle Maschere leeyahay dabaqa sharaf mahrajaan of waji masrixiyada ka Adriana ee Villa ee Tivoli
Cortile del Belvedere heysta Belvedere Apollo ah, mid ka mid ah taalooyinka ugu caansan ee Vatican-ka
Galleria delle Taallo qoreysa ah candelabras qadiimiga fiican – Barberini dabaal degyada ay – Waxa kale oo ka Adriana Villa ee Tivoli
Lucca in Tareenadu Rome
Pope ee joogitaanka xagaaga, Pontifical Villas The – Barberini Gardens ayaa dadweynaha u furan tan March 2014. galo waa nooc ka mid ah way adag tahay in la helo sidii aan la webk. Jardiinooyinka meeshan quruxda badan way dhammaatay 2000 sano jir ah, baxaa oo in ka badan saddex heer. Waxay cajiib ah oo si fiican u qeexan yihiin, iyo heerka final muujinaysaa shaabadihiisa of popes kala duwan xerad xaydaanka.
Si aad ugu raaxaysato safarkaaga adoo booqanaya Vatican City tareenka, Baadh halka aad ka timid oo Rome ka dooro Save Tareenku website inay jartaan a tigidhada tareenka daqiiqo gudahood oo aad dib u bilowdo reyreyn Vatican si degdeg ah ka badan lahaa in aad la filayaa!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fvisiting-vatican-rail%2F%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Vatican Roma tareen safarka travelbytrain travelrome vaticancity